Blog Posts (131)Discussions (101)EventsGroups (7) manawphyulay's Likes Manawphyulay's Friends
Started this discussion. Last reply by JonKawshin Aug 11. ယူနီကုတျတှေ ဘာကှာခွားသလဲ
Started this discussion. Last reply by zayar Apr 22, 2010. View All
manawphyulay posted blog postsExecutive Project Secretary (1) PostProject Manager (1) PostAug 11JonKawshin replied to manawphyulay's discussion အလုပ်လုပ်ရင်း သင်ယူလေ့လာမှုကို ရပ်သင့်သလား"https://www.facebook.com/groups/ciscomyanmar/ မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ"Aug 11manawphyulay leftacomment for kjohnJun 27manawphyulay postedadiscussionအလုပ်လုပ်ရင်း သင်ယူလေ့လာမှုကို ရပ်သင့်သလား လူတိုင်း အရွယ်ရောက်လာရင် အလုပ်လုပ်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ပြီးဆိုရင်ဖြင့် ကိုယ် ဘယ်နေရာမှာ ဘာအပိုင်းကို တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ရမှာလဲ။ ဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲ။ တချို့ကျပြန်တော့ တဖြည်းဖြည်း အသက်သာ ကြီးလာတာ ဘာအလုပ်မှမလုပ်ဘဲ သင်တန်းတွေပဲ တက်နေသူများ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။ မည်သူမဆို လိုအပ်ချက်များကတော့ အနည်းနဲ့အများ ရှိနေကြမှာ အမှန်ပါပဲ။ ဒီလိုလိုအပ်ချက်များကို လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရင်းဖြင့် သင်ယူသွားရင်လည်း ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ အောင်မြင်တိုးတက်ဖို့အတွက် ကြိုးစားမှုကိုလည်း သင်ယူလေ့လာနေခြင်းကနေ အောင်မြင်မှု ပန်းတိုင်ကို…See MoreJun 27 1
manawphyulay leftacomment for Ko ChitJun 27manawphyulay leftacomment for bluephoenix"Long time no see brother...."Jun 27manawphyulay commented on Aung Myint Tun's blog post အင်တာနက်သုံးရင်း တစ်နေ့ကို $160 ရမည့် Online ငွေရှာနည်း"မြန်မာပြည်က ကလစ်ရင် အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုနည်းလမ်းကတော့လေ..."Jun 27manawphyulay leftacomment for bluephoenixJun 27 More... RSS
Post Graduate Diploma in Computer Application (PGDCA), Post Graduate for Young Entrepreneurs Program
Posted on June 27, 2014 at 9:31am0Comments
- Leading and updating the candidates and CVT-CI database.
- Leading and updating the recent workplaces of CVT-CI.
- Preparing teaching plans and support of teaching events.
- Daily cash flow handling in… Continue Project Manager (1) Post
Posted on June 27, 2014 at 9:27am0Comments
- Organizing of project work, coordinating the stake holders
- Contact related people and organizations (local and international)
- Set up and lead meetings, writing minutes and reports
- Managing staff members in CVT-CI… Continue လုပ်ငန်းခွင်မှ လူငယ်များအတွက် အဆင့်မြင့်အသက်မွေးမှု အတတ်ပညာသင်တန်းကျောင်း CVT Myanmar
Posted on December 7, 2013 at 11:55am0Comments
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဓိက ကုန်ထုတ်စွမ်းအားစုဖြစ်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ လူငယ်များ အရည်အသွေး တိုးတက်လာစေဖို့ အလွန်လိုအပ်နေတဲ့အချိန် ဖြစ်ပါသည်။ စာတွေ့လက်တွေ့ နှစ်ရပ်လုံး ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်သူ လူငယ်များ အများအပြား ပေါ်ထွက်လာစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CVT Myanmar… Continue သီချင်း ခေါင်းစဉ်လေးများနှင့် နိုင်ငံခြား အလုပ်သမား ဘဝ
Posted on December 7, 2013 at 11:30am0Comments
နိုင်ငံခြားရောက် အလုပ်သမားတွေရဲ့ ဘ၀လေးတွေကို အများသူငှါသိရှိစေရန်အတွက် နိုင်ငံခြားရောက် အလုပ်သမားများကို အင်တာဗျူးပြီးသကာလ သူတို့တွေရဲ့အလုပ်သမားဘ၀တွေကို သီချင်းစာသားများနှင့် မေးမြန်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
လုပ်ရတဲ့ အလုပ်က နောနော်( အတိုင်းထက်အလွန်)
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ လုပ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေက ခက်ခဲလှပြီး အဆမတန် ပင်ပန်းလှပါတယ်။ ဥပမာဆိုရရင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေကြရတဲ့သူတွေဆိုရင် နေပူ၊လေပူဒဏ်တွေ ခံနေကြရပြီး ချွေးတွေက ကိုယ်ပေါ်မှာ… Continue လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဖားများအကြောင်း
Posted on January 16, 2013 at 2:50pm 10 Comments
ဖားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ သူဌေးက ပေးထား၊ ကျွေးထားသူ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မျက်စိဒေါင့်ထောက်ကြည့်ပြီး သူဌေးကို အတို့အထောင်ပြန်လုပ် သူဌေးယုံကြည်အောင် ပြောဆိုနေသူများကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သူဌေးက မမေးရသေးဘဲနဲ့ တစ်လုံးမကျန် အိပ်သွန်ဖာမှောက် အူမချေးခါးမကျန် ပြန်လည်တင်ပြကြသည် များကို ဆိုလိုပါသည်။ ကောင်းသတင်းကို ပြန်မပြောပဲ မကောင်းသတင်းကို ပြန်လည်ဖြန့်သည်များကို ဖားလို့ သတ်မှတ်ထားခြင်း… Continue AddaBlog Post